Lautaro Martinez oo isagoo da’yar iska diiday mid ka mid ah Kooxaha waa weyn ee Spain… (Ma Real Madrid mise Barcelona?) – Gool FM
RASMI: Manchester United oo xaqiijisay bixitaanka mid ka mid ah xiddigaheeda
RASMI: Arsenal oo dhammeystirtay saxiixa Martin Odegaard… (Muxuu yahay heshiiska ay kusoo qaadatay?)
Mundo Deportivo oo baahisay qorshaha ay Barcelona kula soo saxiixaneyso xiddig ka tirsan Chelsea
Tababare Thomas Tuchel oo doonaya inuu Erling Haaland ku soo biiro Chelsea & Blues oo markale suuqa lacag ku bixinaysa
Arteta oo ka hadlay wararka la xiriirinaya Arsenal inay ku dhowdahay heshiiska Martin Ødegaard
Muxuu ka yiri Guardiola kaddib guushii weyneyd oo ay Manchester City ka gaartay West Bromwich??
Lautaro Martinez oo isagoo da’yar iska diiday mid ka mid ah Kooxaha waa weyn ee Spain… (Ma Real Madrid mise Barcelona?)
Dajiye April 4, 2020
(Milan) 04 Abril 2020. Madaxweynaha Kooxda Racing Club ee Victor Blanco ayaa shaaca ka qaaday in weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez uu isagoo da ‘yar iska diiday fursad uu ugu biiri lahaa Real Madrid.
Martinez ayaa ka soo dhaqaaqay Kooxda reer Argentina ee Racing, wuxuuna ku biiray Naadiga reer Talyaani ee Inter Milan sanadkii 2018-kii, isagoo guulo waa weyn ku qaatay garoonka San Siro.
22-sano jirkaan ayaa dhaliyay 16 gool xilli ciyaareedkan, waana qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa ee soo mara, isagoo la la xiriirinayo Kooxaha Manchester City, Barcelona iyo Real Madrid.
Sida laga soo xigtay Blanco, ciyaaryahan Martinez ayaa hadda ka hor iska diiday fursad uu ugu biiray karay Kooxda Los Blancos lagu naanayso ee Real Madrid.
“Real Madrid waa ay u yimaadeen isaga iyagoo raadinaya, waxay u soo bandhigtay heshiis amaah ah oo leh ikhtiyaar iibsasho ah,” ayuu u sheegay Jariiradda Mundo Deportivo.
“Si kastaba ha ahaatee, isagu waa uu diiday suurtagalnimadaas, maxaa yeelay wuxuu rabay inuu ku guuleysto Kooxda Racing ka hor inta uusan bannaanka u bixin, waa uu iska joogay, aad ayuuna ugu addeeyey himilooyinkiisa.”
Xiddiga xulka qaranka Argentina ee Martinez ayaa xan lagu hayaa in qiimaha heshiiskiisa kooxda Inter lagu burburin karo uu ka yar yahay 100 milyan oo gini.
Arturo Vidal oo go’aan ka gaaray haddii Kooxda uu milkiyaddeeda leeyahay ay mushahar dhimis ku sameynayso xiddigaheeda
10-ka xiddig ee maalqabeenka ahaa ka hor inta aysan soo gelin kubadda cagta... (Pique, Pirlo, Kaka & Kuwo kale)